Kedu ihe nitrophoska: ngwugwu na ntuziaka maka ojiji - Fatịlaịza - 2019
Nitrophoska - nke dị na nitrogen-phosphorus-potassium fatịlaịza, nke a na-eji eme ka mkpụrụ nke ubi na ubi nile kụrụ.
Taa, anyị ga-atụle njirimara nke nitrophosphate na ihe onwunwe ya, deekwa ọnụego ngwa ngwa maka osisi dị iche iche.
Uru nke nri ndị a
Ọgwụgwọ ma jiri maka omenala dị iche iche
Maka okooko osisi n'ime ụlọ
N'ihi na Roses
N'ihi na kabeeji
Esemokwu dị n'etiti nitrophosphate na nitroammofoski
Ngwakọta mepụtara na ntọhapụ
Dabere na ihe ndị a, ọ bịara doo anya na fatịlaịza nitrophosphate nwere isi ihe atọ dị na nchịkọta ndị a:
nitrogen - 11%;
phosphorus - 10%;
potassium - 11%.
Otú ọ dị, dabere n'ebumnuche ahụ, pasent nke akụrụngwa ọ bụla nwere ike ịdị iche.
Na mgbakwunye na isi ihe atọ ahụ ngwakọta nke nitrophoska gụnyere ọla kọpa, boron, manganese, molybdenum, zinc, magnesium, cobalt.
Iji jide n'aka na ihe niile dị na ngwa ngwa na nke ọma na osisi, a na-enye ha salts: ammonium chloride, ammonium nitrate, ammophos, superphosphate, mmiri ozuzo, potassium nitrate na calcium chloride. Ihe omimi a na-eme ka o gboo mkpa nke oke osisi nile na-eto n'elu ala.
Ị ma? Achịcha ndị nchịkwa Soviet na ndị Nazi Germany nwere "ohi" maka ntụziaka maka ị nweta nitrofoski.
Banyere ụdị ntọhapụ, nitrophoska dị n'ụdị mgbochi ntụpọ nke agba ntụ ma ọ bụ na-acha ọcha. A na-ekpuchi nsogbu dị iche iche a na-echebe ha site na mmiri ma na-eri nri, ya mere oge nchekwa nke uwe mgbakwasa elu na-aba ụba.
Ekwesiri ikwu na nitrophoska bụ nchekwa dị mma, mgbe nke a gasịrị, ị na-etinye ihe ọkụkụ na gburugburu ebe obibi.
Ọ dị mkpa! A na-echekwa owuwe ihe ubi gburugburu ebe obibi ma ọ bụrụ na ị na-agbaso ọnụego nke ngwa.
Ọzọkwa, dabere na ihe ndị ahụ, uru ọzọ nwere ike ịkọwapụta ntụgharị nke fatịlaịza a. Nitrophoska nwere ihe niile dị mkpa ma chọpụta ihe dị iche iche, na-enye mgbagwoju anya omenala. Nke a pụtara na ọ dịghị mkpa ka ị tinye nri dị iche iche na ịnweta ala, ebe Nitrophoska na-enye ihe oriri na-edozi nke osisi. Arụmọrụ. Ọ dịghị mkpa ka ị na-akụ nri nke ịnweta ịnweta iji nweta mkpụrụ osisi a tụrụ anya ya. O zuru ezu iji dochie obere mkpọmkpọ ebe, ọbụna na ụlọ ahịa pụrụ iche bụ ọnụ ala.
Njirimara kachasị elu. Ebe ọ bụ na granulu na-agba ngwa ngwa na mmiri mmiri ahụ, ihe niile ahụ na-adaba n'ime ala ozugbo ma usoro mgbọrọgwụ na-etinye ya ngwa ngwa. Ịkwesighi ichere ọtụtụ izu maka ihe dị mgbagwoju anya iji mebie n'ime ndị dị mfe n'okpuru nduzi nke mmiri na okpomọkụ. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa "ịkwado" osisi ahụ mgbe "nsogbu" nke ihu igwe, ọrịa ma ọ bụ pests, mgbe ahụ, "Nitrophoska" ga-adịrị gị mma.
N'ịkọwa ihe niile dị n'elu, anyị nwere ike ikwubi na nitrophoska bụ fatịlaịza fatịlaịza dị ala, nke dị mfe, na-agbakwụnye nke ị nwere ike ichefu maka ntinyekwu ihe nchịkwa (ka a ghara inwe mgbagwoju anya na ntinye ihe oriri).
N'elu, anyị dere na, dabere na ọdịbendị ịchọrọ ịzụ, ịkwesịrị iji nitrophosphate nwere ọdịiche dị iche iche nke ihe ndị bụ isi. Ya mere, ka anyị kwuo banyere ole fatịlaịza chọrọ maka otu ihe ọkụkụ, tụlee ụzọ aghụghọ nke ngwa na ọnụego nitrophosphate n'ala.
Fertilizing nke seedlings na nitrophoska na-eme naanị ma ọ bụrụ na ndị na-eto eto na osisi dị ike, ma ọ bụ ibu na mmepe na-egbochi. A na-ejikwa ya mgbe ị na-ebute seedlings na ala na-emeghe, na-agbakwunye ọkara nke 13-15 na nke ọ bụla nke ọma. A ghaghị agwakọta nsogbu dị na ala ka ha wee ghara ịbanye kpọmkwem na mgbọrọgwụ.
Iji nweta ezigbo ihe ubi nke tomato, kabeeji savoy, eggplants, eyịm, mgbịrịgba bell, na-akụ akwụkwọ ndị a mma mgbe ha na-ejikọta oge ụfọdụ nke ọnwa na ihe ịrịba ama nke zodiac.
Maka ịgbara ike na-adịghị ike anyị na-eme ka ihe ngwọta ndị a: maka 10 lita mmiri anyị na-ewe 150 g nke granulu. Gbasaa fatịlaịza mmiri na ụdị nke ọ bụla nwere ihe karịrị 20 ml.
Ọ dị mkpa! Fatịlaịza ahụ na-eduga ná mmebi nke seedlings na oke ngwa ngwa, nke na-esote na-emetụta mkpụrụ.
Fatịlaịza adịghị emerụ ahụ, ma ọ bụ naanị na-enyere aka na mmepe. Otú ọ dị, ekwesiri icheta na ọ bụrụ na mgbe ị na-ebubata n'ime ala a na-emeghe, ị ga-echere ma ọ dịkarịa ala izu abụọ tupu ịmepụta nri ndị ọzọ na-agụnye ihe ndị bụ isi (nitrogen, phosphorus, potassium).
N'okwu a, ọ dịghị ihe ọ bụla na-atụ egwu ihe ọjọọ nke fatịlaịza, ebe ọ bụ na anyị agaghị eri okooko osisi. Ọtụtụ nwere ike ịjụ ihe mere ị ga-eji mee ka mmiri fụchaa ma tinye ego na ya? Ọ bụrụ na ị na-etolite osisi ndị na-adọrọ adọrọ na-achọ ka ha 'na-efopụ ájá', mgbe ahụ, fatịlaịza siri ike bụ ihe ị chọrọ. Ọ gaghị eme ka osisi ahụ dịkwuo ndụ ma nyekwuo ume maka ibu, ma kwalitekwa nsogbu. Anyị na-ahọrọ n'elu mgbakwasa na nnukwu calcium ọdịnaya iji mee ka ọnụ ọgụgụ buds ma mee ka agba ha ka doo anya.
Calathea, azalea, arrowroot, anthurium, gardenia, orchid nwere ike ghara ibu ome ma obu ndi na-eto ugbo, dika osisi ndi a n'ime ha di oke egwu ma choro nlekọta puru iche.
Maka mmiri ogbugba mmiri, anyị na-etinye ngwakọta, na-agbakwunye 6 g n'elu mgbakwasa 1 l mmiri. Ọ kacha mma ka ifatilaiza osisi na mmiri na n'oge okpomọkụ. Oge mgbụsị akwụkwọ na oyi na-eri ga-ekwe omume naanị ma ọ bụrụ na ifuru enweghị ihe ọ bụla, ma ọ bụ ọrịa / pests.
Nitrophoska bụ ezigbo fatịlaịza ọ bụghị nanị maka ime ụlọ, kamakwa maka na-eto eto n'ubi a, ya mere, ka anyị kwuo maka iji ya mee ihe maka Roses. Ọ dị oké mkpa iji mgbatị dị otú ahụ na mmalite nke ọkọchị iji mee ka okooko na-agba ọsọ ma mee ka buds ahụ dịwanye njọ.
Ihe ngwọta maka ogbugba mmiri n'ubi na-eme dị ka ndị a: maka 2-3 lita mmiri ha ewe 2-3 tbsp. l ncha elu na mmiri ọ bụla osisi na mgbọrọgwụ. Nri ọnụego - 3-4 lita n'okpuru ohia.
Nitrophoska bụ fatịlaịza zuru ụwa ọnụ, ya mere, ka anyị kwuo maka iji ya mee ihe maka strawberries. Enwere ike iji mgbatị kacha elu naanị n'oge opupu ihe ubi na n'oge okpomọkụ iji mee ka arụpụta ihe. A na-agbakwụnye ya na "ọhụrụ" nke ọma mgbe transplanting bushes maka ngwa ngwa acclimatization na ebe ọhụrụ.
Maka ogbugba mmiri n'uzo iji ngwusi na-esote: 15 g nke ihe kwa 5 lita mmiri. Norm - 0,5 na 1 ohia.
Ọ dị mkpa! Mgbe ị na-ebugharị, mechie mgbakwasa ka mgbọrọgwụ strawberry ghara ịbanye na pellets, ma ọ bụghị na a ga-enwe ọkụ.
A na-ebu akwa mgbakwasa tupu okooko, n'oge okooko na mgbe owuwe ihe ubi.
Ugbu a, ka anyị kwuo banyere otu esi fezii nitrofoskoy raspberries. Utu dị oke mkpa iji na-eri ihe kwa afọ iji nọgide na-enwe ma ọ bụ na-amụba mkpụrụ, nakwa dị ka ibelata ọrịa.
Mee "mmiri ịnweta" na okooko na mgbe owuwe ihe ubi wee nweta ọtụtụ tomato buru ibu na igbochi nkwụsị nke osisi ahụ na ọdịda.
A na-eli pellets n'ala n'enweghi mmiri ma ọ bụ na-atụgharị na mmiri. Ngwa ọnụahịa - 50 g kwa square. Ma tupu owuwe ihe ubi na mgbe ọ gasịrị, a ga-ebute otu ọnụego ahụ. O kwesịkwara ichetara na ọnụ ala fatịlaịza adịghị adabere na ọnụ ọgụgụ nke osisi, ya mere emela ka usoro onunu ogwu.
A na-emepụta currants na-edozi elu dị ka raspberries, ma a na-eme ka usoro onunu ocha di na 150 g kwa 1 sq. Km. E kwesiri iburu n'uche na currant nwere nlezianya nke chlorine, ya mere i kwesiri igbanwe fatịlaịza n'ejighi chlorine. Rịba ama pasent nke ala. Otu mkpụrụ osisi na-eri nri n'ime afọ 3-4 zuru ezu maka ohia, ya mere ahọrọ fatịlaịza na ọdịnaya belata nke mmewere a. Ihe na-esi na ya pụta nwere ike ibute ọrịa dịgasị iche ma belata ihe mgbochi nke ọdịbendị.
Ugbu a, tụlee iji fatịlaịza nitrophoska mee ka mkpụrụ nke tomato ghọọ mkpụrụ. Maka ọdịbendị a, nke a bụ nri kasị baa uru, ebe ọ na-egbo mkpa nke osisi site 100%.
Nke bụ eziokwu bụ na tomato na-adabere na isi ihe niile n'oge ọ bụla na-eto eto, ya mere, a na-etinye pellets n'oge a na-akụ (1 tablespoon nke ọ bụla onu) ma ọ bụ na-ebulite mkpụrụ osisi na-emeghe (otu ụdị usoro ahụ dị ka mgbe ị na-eri nri ọ bụla ọzọ ). Izu abụọ mgbe ị na-ebute ihe ndị a na-amị mkpụrụ, a na-eme ka ha ṅụọ mmiri na nitrophoska (5 g kwa 1 l nke mmiri).
E nwere ụfọdụ ọdịiche nitrofoski kachasị mma maka tomato. Mgbe ị na-azụ fatịlaịza, ṅaa ntị na nke nwere sọlfọ ma ọ bụ nwee ụba nke sitere na ya. Sulfuric acid supplementation na-eme ka e nwee protein nke ihe oriri ma bụrụ ihe fungicide nke na-agbagha ọtụtụ pests. Phosphate nitrophosphate nwere nsonaazụ dị mma na mkpụrụ nke mkpụrụ osisi, ndụ ha na ndụ ha.
Ngwongwo mgbochi dị mkpa karịsịa maka cucumbers n'oge ọ bụla nke mmepe, ruo n'omume zuru ezu nke mkpụrụ osisi.
Nitrophoska na-agbanye na ala tupu agha. Ya mere, ị ga-edozi nsogbu dị iche iche ozugbo: nye azịza chọrọ nke nitrogen na osisi ahụ, nke ga-enye ya ohere ịmalite ngwa ngwa; n'ime izu ole na ole, cucumbers ga-amalite na-eche na ọ dị mkpa maka site na ya, bụ nke na-aga ozugbo; Potassium ga-emetuta mkpụrụ osisi ahụ n'ụzọ dị mma, na-eme ka ha nwekwuo ụtọ ma dị ụtọ. Ọnụego nke ịgha mkpụrụ - 30 g kwa square. A na-emepụta cucumbers ọzọ na ngwọta na ngụkọta nke a: 4 g nke ihe dị n'ime 1 l nke mmiri. Ọnụ ọgụgụ ngwa ngwa nke ọ bụla ohia - 0.3-0.5 l.
N'elu elu, anyị dere na maka tomato ọ ka mma iji nkume phosphate ma ọ bụ sulphate nitrophosphate. Ma maka ịkwadebe kabeeji, zụrụ nanị ihe mgbakwunye sulphate, ebe ọ kachasị mma na-egbo mkpa niile nke ọdịbendị.
A na-ebu nri mbụ n'ile nke ịmanye seedlings. 1 g nke ihe na-agbaze n'ime 1 l nke mmiri ma jiri ya mee ihe. A na-eme nri nke abụọ n'oge a na-ebu seedlings.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na n'afọ a ka ị mepụtara fatịlaịza nke ala "Nitrofoskoy" na mpaghara ebe ị na-eme atụmatụ ịkụ mkpụrụ nke kabeeji, mgbe ahụ ị pụghị itinye akwa mgbakwasa n'oge akuku.
Na nke ọma ọ bụla dina 1 tsp. agwakọta ma kpoo ya n'ala ka ha wee ghara ibanye na mgbọrọgwụ. Ọzọkwa, n'ime ọnwa ahụ, ị ​​gaghị eme "mmiri ịnweta mmiri" nke mere na ọ dịghị ihe ọ bụla. A na-eme nri nke abụọ na nke atọ na nkeji ụbọchị 15. A na - eji ngwọta na - esonụ: 30 g kwa 10 l mmiri. Okwesiri iburu n'uche na ejiji nke ato bu ihe kwesiri ya maka nani oge ogwu.
Nitrophoska maka poteto fatịlaịza na-eme naanị mgbe ị na-akụ. Na nke ọma ọ bụla na-ehi ụra 1 tbsp. l agwakọta ma jupụta n'ala.
Ọ bụrụ na ị ga-akụ nnukwu ibé ala na poteto, mgbe ahụ, ọ ga-abụ ihe amamihe karite iji tinye ego dị mkpa nke fatịlaịza na ọdịda iji chekwaa oge na mmiri. Ịkwesịrị ịme ihe karịrị 80 grams kwa square, nke mere na n'oge opupu ihe ubi ị gaghị etinye mmiri ịnweta mmiri ịnweta.
Ị ma? Isi akụrụngwa maka mmepụta nke nitrophosphate bụ apatite, 47% nitric acid, 92.5% sulfuric acid, amonia na potassium chloride.
Osisi osisi bukwara ihe mgbagwoju anya nke mineral, dika akwukwo nri ma obu okooko osisi. Ka anyị kwuo banyere ọnụego nke ngwa maka ụdị osisi ndị toro eto n'ubi. Ka anyi malite osisi apụl. Nchịkọta ngwa maka ihe akọrọ bụ 500-600 g maka osisi ọ bụla. Fertilizing osisi kasị mma na mmiri, tupu okooko. Ihe kachasị dị irè bụ fatịlaịza mmiri na-adabere na nitrophoska. Ghọta 50 g nke ihe na 10 l nke mmiri ma wụsa ya n'okpuru mgbọrọgwụ. Ngwa ngwa - 30 l nke ngwọta.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na nitrophoska na-agbanye na ya ọcha (na-enweghị dilution na mmiri), mgbe ahụ, ọ ga-ekesa n'elu dum n'akụkụ n'akụkụ osisi ma jiri nlezianya na-egwu ala.
Udara Ọ bụrụ na anyị na-eji granulu ọhụrụ, mgbe ahụ, 200-250 g ga-agbakwunye n'okpuru osisi ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị na-agba mmiri (50 g kwa 10 l), mgbe ahụ, ọ bụ iji wụsa bọket abụọ ngwọta n'okpuru mgbọrọgwụ.
Maka ihe eji eji akwa eji ejiji eji otu onu ogugu dika nke udara.
Ọzọkwa, a na-etinye fatịlaịza mgbe ị na-akụ mkpụrụ. Ọnụ ọgụgụ ngwa ngwa maka osisi mkpụrụ osisi ọ bụla bụ 300 g kwa na-akụ olulu (jikọta ya na ala).
Nitrofoska, ọ bụ ezie na a na-atụle ya dịka nchekwa dị mma, Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ banye nri ma ọ bụ mmiri ọṅụṅụ, a ga-enwe mgbanwe dịgasị iche iche ma ụmụ mmadụ ma anụmanụ. Ọ bụ ya mere ị ga - eji soro nchekwa iwu mgbe ị na-eji fatịlaịza.
A ga-eyi uwe globa mgbe eji nitrophoska. Mgbe ị rụchara ọrụ ahụ, jide n'aka na ị ga-asa aka gị ma saa ahụ ọkụ (ọ bụrụ na ị na-ejikọta ihe ahụ).
N'iburu na anya na anya, kpochapu mmiri. Ọ bụrụ na ihe ahụ abanye n'ime usoro digestive - ṅụọ ihe ọ bụla emetics (potassium permanganate) ma kpọtụrụ dọkịta ozugbo.
Jide fatịlaịza na nri na nri anụ.
Anyị gwụchara isiokwu ahụ site n'ịtụle ọdịiche dị n'etiti nitrophoska na nitroammofoski.
Esemokwu dị iche iche:
izu nke ihe;
ụdị bekee na fatịlaịza;
Usoro nke inweta ihe ndị bụ isi (nitrogen, potassium, phosphorus).
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nitroammophoska bụ nsụgharị nke nitrophoska, bụ nke na-adịghị na kemịkal dị iche iche na nke fatịlaịza a tụlere n'isiokwu a. Nke ahụ bụ, ọ bụ ezie na ngwakọta ndị a nwere aha dị iche iche, n'eziokwu, ha nwere otu ọrụ na nzube ahụ, naanị usoro dịgasị iche.
Ọ na - apụta na ewepụtara nitroammofoska iji gboo mkpa nke ụfọdụ ihe ọkụkụ, ebe ọ bụ otu ihe ndị ahụ dị mkpa, mana ha nọ n'ọgbọ dị iche iche dị mgbagwoju anya.
Ojiji nke nri fatịlaịza na-adabere ọ bụghị nanị uru nke ndị ọchụnta ego na-etinye ngwaahịa na ire ere, kamakwa ezigbo obi ụtọ na gburugburu ebe obibi nke mkpụrụ osisi na tomato, nke ị nwere ike iji sie nri dị iche iche, chebe na ọbụna nye ụmụaka. Atụla egwu nchịkọta ịnweta, ebe nitrogen, potassium na phosphorus dị humus ma ọ bụ compost, ọ bụ nanị usoro onyonyo na-emetụta nsogbu nke mmiri ịnweta.
Mkpụrụ osisi siri ike ma na-amị mkpụrụ "Snowfall" F1 - nkọwa nke ụdị dịgasị iche iche, mmalite, ihe nsị
Ọgwụ ọgwụ na ngwa nke utu
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ojiji nke fatịlaịza nitrophoska maka mkpụrụ dị iche iche